D-Royal – Dental Aesthetics And Implant Center
WELCOME TO D-Royal
Dental Aesthetics And Implant Center
အကြည်‌‌ရောင်‌ အံစွပ်‌က‌လေးများကို အသုံးပြုပြီး သွားညှိကုသခြင်း (Invisalign)
Brace(စတီးကြိုး) တပ်‌ရမယ့်အ‌ရေးကိုတွေးပြီး စိတ်‌ညစ်‌‌နေသူများအတွက်‌ အကြည်‌‌ရောင်‌ အံစွပ်‌က‌လေးများကို အသုံးပြုပီး သွားညှိကုသတဲ့ . . .
တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေါတ်ကြီးထဲမှာ သွားအလှအပကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်လာကြပါပြီခင်ဗျာ၊ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ . . .
မိမိရှေ့သွားလေး မလှမပဖြစ်နေလို့ ဓာတ်ဖမ်းတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Facebookမှာ Profile Picture (Pp) တင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိသွားကို စိတ်တိုင်းမကြလို့ . . .
D-Royal Dental Aesthetic And Implant Center ကို 20.5.2015 တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ D-Royal Dental Aesthetic And Implant Center ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု ၊သင့်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်း ၊အရည်အသွေးကောင်းသော သွားပစ္စည်းများနှင့် လူနာများရဲ့ သွားကျန်းမာရေး ကုသမှု ကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိူင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Specialist Of Our D-Royal Dental Aesthetic
Wutt Hmone customer
လက်ရာကောင်းကောင်း စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အသေးစိတ်ပြီးတော့ကို သေချာဂရုစိုက် ကုသပေးတဲ့ Lady Doctor ချောချောလေးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်နော်.. ငယ်ငယ်ထဲက သွားဆေးခန်း သွားရတိုင်း ကြောက်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် အသက်ကြီးလာပေမယ့်လည်း၊ သွားအလှအပအတွက် ဆေးခန်းပြရတာပေမယ့်လည်း စိတ်ထဲမှာကြောက်နေတုန်း.. Doctorတွေက နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိပေးတာကြောင့် အရမ်း ease & comfort ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. အခုဆို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ သွားဖြဲပြီးရယ်နိုင်သွားပါပြီလို့ ..
Amon Phyo Maung Customer
ဆရာရော ဆရာမပါ သေချာဂရုတစိုက် လုပ်ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ လက်ရာအရမ်းကောင်းသလို လူနာ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုလဲ သေချာရှင်းပြပေးပြီး ရက်ချိန်းလဲမှန် စိတ်ရှည်တဲ့အတွက် တော်တော် စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ နောက်ဆို "သွား" နဲ့ပတ်သက်ရင် D Royal ကိုလာခဲ့ပါလို့ မိတ်ဆွေအားလုံးကို recommendပေးတယ်နော် . . .
Khin Lay Myint Customer
🌟Team work လေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ဆရာ ဆရာမတို့ ဆေးခန်းကို အရမ်းသဘောကျတယ် . . .😍😍 🌟 သန့်ရှင်းပြီး စနစ်ကျတဲ့အပြင် လူနာအပေါ် ရင်းနှီးပြီး နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံမှုလည်း ရှိတယ် . . . 😍😍 🌟D Royal Dental Clinic . . . ဆေးခန်းကြီး ဒီထက် ပိုမိုအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ🌟
Aye Thet Khine Customer
This clinic is very good place. All doctors are very kind to their patients.They treat like family,friendly.i felt like.Very warmly. I wanna give you suggest- If you have any case for your teeth you should go there.Don’t choice other. So, Let’s Go 👍🏻👍🏻👍🏻😁
ပီကေဝါးရုံနဲ့ သွားကောင်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?
လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့် သွားဖြူအောင်ပြုလုပ်ခြင်း (Laser Whitening Treatment)
© 2020 | D-Royal Dental Clinic | All Rights Reserved & Developed by Hap Eye Co., Ltd.